४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए, मरेको सम्झेर शोकाकुल थियो परिवार
HOME » ४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए, मरेको सम्झेर शोकाकुल थियो परिवार
डिसी नेपाल , २९ पौष २०७४
एक युवतीसँगको प्रेमको विषयलाई लिएर अन्य ३ युवकले निर्घात कुटपिट गरी हातखुट्टा बाँधेर ४ सय फिट अग्लो भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किएका छन् । उनलाई ती ३ युवकले अपहरण गरेका थिए । भारतको इन्दौर शहरका बिएस्सीमा पढिरहेका २० वर्षका युवक मृदुल भल्लालाई अपहरण गरेर ती युवकले ३१ किलोमिटर टाढा लगेर निर्घात कुटपिट गरेपछि हातखुट्टा बाँधेर भीरबाट फालेका थिए । उनीहरुले हत्याको नियतले माथिबाट ढुंगा समेत लडाइदिएका थिए ।
यता घरबाट उनी बेपत्ता भएपछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । शुक्रबार प्रहरी घटनास्थलमा शंका लागेपछि भीरबाट तल गएको थियो । घटनास्थलबाट ४ सय मिटर तल पुग्दा प्रहरीले मृदुलको कपडा देख्यो । ४५ मिनेट लगाएर भीरबाट तल जाँदा प्रहरीले मृदुललाई झरनामा घोल्टो परेर लडेको अवस्थामा भेट्यो । प्रहरीले उनलाई पल्टाउँदा उनको मुखबाट हावा निस्कियो । जिउँदै देखेपछि प्रहरीले घटनास्थलमै डाक्टर बोलायो ।
दिउँसो १२ बजे उनलाई माथि ल्याएर इन्डेक्स मेडिकल कलेज पु¥याइयो । प्रहरीका अनुसार मृदुललाई ७ जनवरीका दिन दिउँसो २ बजे फ्यााकिएको थियो । १२ जनवरीका दिनसम्म त्यस्तो स्थानमा उनलाई जीवितै देखेर डाक्टर पनि चकित परेका छन् । डाक्टरका अनुसार मृदुलका हातखुट्टा चिसोले ककरिएका थिए तर उनको मुटु फोक्सो र कलेजोमा धेरै चोट थिएन । ढुंगाले घाउ भइको भए पनि घोप्टो अवस्थामा नालीमा फस्दा उनको रक्तश्राव रोकियो । चिसो भएका कारण घाउका त्यति धेरै संक्रमण पनि हुन पाएन । सास फेर्न पनि कुनै समस्या नभएका कारण उनी जीवितै रहन सके ।
घटनाको मुख्य आरोपी २४ वर्षका आकाश रत्नाकर भएको बताइएको छ । आफ्नी प्रेमिकासँग मृदुल नजिकिएको आशंकामा उनले हत्याको प्रयास गरेका थिए । उनका साथी २० वर्षका विजय परमार र रोहित भनिने २३ वर्षका पियुष परेतासँग मिलेर आकाशले आफ्नै दाजुको स्विफ्ट कारमा मृदुलको अपहरण गरेका थिए । आकाशले दूधवालाको फोन मागेर मृदुललाई फोन गरेर आफ्नी प्रेमिकाका काका बनेर भेट्न बोलाएका थिए । तीनै जना आरोपी फरार छन् र उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अब मोबाइलबाटै प्रेमिकाको गुप्तांग छुन सकिने र सेक्सको आनन्द पनि (भिडियो सहित)
२० वर्षीया मोडल मानुसीको हत्या, सुटकेसमा खाँदेर झाडीमा फालिएको शव भेटियो
हेमा मालिनीलाई देखेपछि भुतुक्कै हुन्थे यी अभिनेताहरु
ट्रम्पकी श्रीमती मर्दामर्दै बाँचिन्
बार्सिलोना छाडेकोमा नेयमारलाई पछुतो, बार्सा फर्कने चाहना
युट्युवमा रिलिज गरिएको केही दिनमै 'म यस्तो गीत गाउँछु' ट्रेन्डिङ २ मा (फिल्म सहित)
दशैंको टिका को बाट थाप्दै हुनुहुन्छ : पूर्वराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कि आफन्तबाट ?
अबको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' : रेणु दाहाल (भिडियो)
१० वर्ष कान्छा निकसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी प्रियंका आउँदो डिसेम्बरमा बिहे बन्धनमा बाँधिदै
मेस्सी र रोनाल्डोबिनाको 'एल क्लासिको' कस्तो होला ?
नेपालले यसरी खेल्न सक्छ विश्वकप क्रिकेट, आईसीसीले बनायो यस्तो रोडम्याप
राजस्थानमा नेपाली युवतीमाथि बलात्कार हुँदा नांगै चार तलाबाट कुदेर ज्यान बचाइन्
बङ्गुरपालनका सफल व्यवसायी
केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएपछि..
अनेसास न्यूह्यामसायरमा ११०औं देवकोटा जयन्ती तथा संस्थाको पाँचौ साधारण सभा सम्पन्न
शान्तिपुरको जीर्णोद्धार पूरा हुन सकेन
कुखुराका चल्ला बरामद
व्यास क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु
कर्णालीमा मोबाइल एप्स